I-US DOT isekela inombolo yokurekhoda yokwethulwa kwesikhala sokuhweba
Ikhaya » Izindaba Zamuva » Izindaba zikaHulumeni » I-US DOT isekela inombolo yokurekhoda yokwethulwa kwesikhala sokuhweba
zezindiza • Izindaba Ezintsha Zokuhamba • Izindaba zikaHulumeni • Izindaba • Ubuchwepheshe • Transportation • Izimfihlo Zokuhamba • Izindaba Zocingo Lokuhamba • I-USA Izindaba Ezintsha • Izindaba Ezihlukahlukene
The UMnyango Wezokuthutha we-US Unonyaka orekhodiwe onokweseka ukwethulwa kwesikhala sokuhweba esinamalayisense angama-35 kuze kube manje ngonyaka we-2020 onamandla okuthola okuningi nangaphezulu ngaphambi kokuphela konyaka. Irekhodi langaphambilini lama-33 lasungulwa ngonyaka we-2018.
"Inani elirekhodiwe lokwethulwa kwalo likhombisa ukuzibophezela kwalaba baphathi ekusekeleni emisha nasekukhuleni kwemboni yezentengiselwano yezokuthutha yaseMelika nokuhola umhlaba wonke emakhonweni endiza," kusho uNobhala Wezokuthutha wase-United States u-Elaine L. Chao.
Okwe-2021, i-Federal Aviation Administration (FAA) ibikezela ukukhula okuqhubekayo kokwethulwa kwesikhala sokuhweba okunelayisense okungafika ku-50 noma ngaphezulu.
Ukwethulwa kwesikhala sezentengiselwano sango-2020 kumboza ukuhlukahluka kokuthunywa kufaka phakathi umkhankaso wokuqala we-FAA onikezwe ilayisense kwi-International Space Station (ISS), ukuphindiselwa kabusha kwezimpahla kuphela kwe-ISS, ukulethwa kweziphuphutheki zamabhizinisi ezizimele ku-orbit nokuhlolwa kwama-capsule esikhala nezinhlelo zamarokhethi . Ukwethulwa kwenzeka ezindaweni eziyisikhombisa zombili ezifuywayo nezangaphandle: i-Alaska, California, Florida, New Mexico, Texas, Virginia naseNew Zealand.
I-FAA isanda kuhlehlisa futhi yenza isimanje imithethonqubo elawula ukwethulwa kwendawo yezentengiselwano nokunikezwa kwamalayisense okungena kabusha njengoba kuqondiswe kuMhlahlandlela kaMongameli kaMkhathi wangoMeyi 2018 -2. Umthetho omusha usiza ukukhula okukhulu nokusungula izinto ezintsha embonini ye-aerospace, igcina ukuphepha komphakathi, futhi isiza i-US ukuthi iqinise isikhundla sayo sokuhola emhlabeni.
Ilayisense ye-FAA iyadingeka ukwenza noma yikuphi ukwethulwa noma ukungeniswa kabusha kwezentengiselwano, ukusebenza kwanoma isiphi isiza sokuqalisa noma sokungena kabusha ngezakhamizi zase-US noma kuphi emhlabeni, noma yinoma yimuphi umuntu noma inhlangano ngaphakathi e-United States. Lapho i-FAA isikhipha ilayisense noma imvume, i-ejensi isebenza nabasebenza ukwenza isiqiniseko sokuthi bahlangabezana nezidingo zokwenza ukwethulwa nokufakwa kabusha. Lokhu kufaka phakathi ukuthi abahloli bezokuphepha be-FAA baqaphe imisebenzi enelayisense. usayizi = 2 ububanzi = "100%" qondanisa = isikhungo>
Ukugonywa kwe-COVID-19 manje kuphoqelekile kuyo yonke i-Air Canada ...